विदेशमा बसेर एमसीसी ठिक छ भन्नेहरुलाई डा. युवराज संग्रौलाले दिए कडा जवाफ – Khabar Silo
विश्वव्यापी रुपमै कोरोना भाइरसको संक्रमण पुरुषमा बढी देखिएको छ र मृत्युदर पनि पुरुषकै उच्च छ, महिला एवं बालबच्चाको तुलनामा । किन त ? यसमा के अनुमान गरिएको छ भने धेरैजसो पुरुष धुमपानको अम्मली हुन्छन् । धुमपानले सोझो असर गर्ने भनेको फोक्सोमा हो । यसले फोक्सो र सास नलीमा नराम्ररी असर पु¥याउँछ । त्यसैगरी कोरोना भाइरसको […]
काठमाडौं । अफगानिस्तानबाट कतार हुँदै १२७ जना नेपालीहरु काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरु जजिरा एयरको विमानमार्फत् आज बिहान काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छन् । अफगानिस्तानको काबुलबाट अमेरिकी एयरफोर्सले उनीहरुलाई उद्धार गरेर कतारको दोहा पुर्याएको थियो । दोहाबाट कुबेत हुँदै उनीहरुलाई काठमाडौं ल्याइएको हो । उद्धार गरेर ल्याइएका नेपाली अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा गार्डका […]